Gazety lasibatry - China Ningbo Sine
Gazety Magnet gazety lasibatry Manufacturer Sine andriamby Company Limited gazety lasibatry ny ankapobeny no anarana ho an'ny maharitra avoakan'ireo andriamby, ampiasaina amin'ny fanamafisam-peo, ny mpandahateny sy ny écouteur. Avoakan'ireo andriamby, no fototra faritra ireo karazana entana. Manome maharitra sahan'andriamby ho an'ny coil ao amin'ny mpandahateny, haingana alternating fitarihan 'ny amin'izao fotoana izao dia mitondra cone tadin sy miverina, ary avy eo dia ny teny faneva tonga avy tao an-mpandahateny. Ny lasibatry ampiasaina ao mpandahateny sy ny écouteur ny M ...
gazety lasibatryManufacturer Sine andriamby Company Limited
Gazety lasibatry no ankapobeny anarana ho an'ny maharitra avoakan'ireo andriamby, ampiasaina amin'ny fanamafisam-peo, ny mpandahateny sy ny écouteur. Avoakan'ireo andriamby, no fototra faritra ireo karazana entana. Manome maharitra sahan'andriamby ho an'ny coil ao amin'ny mpandahateny, haingana alternating fitarihan 'ny amin'izao fotoana izao dia mitondra cone tadin sy miverina, ary avy eo dia ny teny faneva tonga avy tao an-mpandahateny.
Ny lasibatry ampiasaina ao mpandahateny sy ny écouteur ny ankamaroan'ireo néodyme avoakan'ireo andriamby, sy ferrite avoakan'ireo andriamby . Izy ireo dia miendrika amin'ny peratra na kapila isan-karazany ny habeny. Ferrite avoakan'ireo andriamby, dia tena ampiasaina amin'ny farany ambany sy ny fanamafisam-peo sy ny écouteur mora. Ny fihetseham-po tsy tsara toetra ampy. Ferrite mpandahateny avoakan'ireo andriamby, dia matetika be vava amin'ny habe ny D72xd32x15mm, D60xd24x13mm, D90xd36x17mm, D90xd36x15mm, D36xd18x8mm, D80 X d40 X 10mm, D80x d40 X 15mm, D90 X d50 X 15mm, D110x d60 X 15mm, D110 X d60 X 17mm, D110 X d60 X 18mm sy sns
Raha néodyme maharitra avoakan'ireo andriamby dia matetika ampiharina amin'ny mpanelanelana amin'ny tontolo sy ny kilasy ambony écouteur. Ny fihetseham-po tsara dia tsara, feo fihenjanan'ny resaoro no tsara, feo tsara tarehy fampisehoana sy ny toerany any an-tsaha tsy misy kilema no marina. Noho ny manam-fampisehoana, salantsalany sy fahazavana kely néodyme avoakan'ireo andriamby, afaka displace salantsalany lehibe sy mavesatra ferrite lasibatry sasany fampiharana tsikelikely.
Fampiasa matetika habe ny néodyme mpandahateny avoakan'ireo andriamby, dia D50x12mm, D50x10mm, D6x1mm, D6x1.5mm, D6x5mm, D6.5 × 1.5mm, D6xd2x1.5mm, D12x1.5mm, D12.5 × 1.2mm sy ny sisa. Misy isan-karazany ny habe azo namboarina toy ny isan-mpanjifa sy ny mpampiasa 'fitakian'ny.
Previous: Motor Generator avoakan'ireo andriamby,
Manaraka: Andriamby Filter Bar
Levitating Bluetooth gazety